Mpanamboatra sy mpamatsy bibikely tsy misy vy | China Stainless Steel Pet Comb Factory
Famonoana biby ho an'ny biby fiompy
Ity fonosana mpiambina biby fiompy ity dia Heavy Duty, maivana be izy io, nefa matanjaka, manana boribory boribory vita amin'ny aliminioma sy fonosana Anti static ka afaka mampihena ny static.
Famonoana biby fiompy vita amin'ny alikaola miaraka amin'ny nify vy tsy misy fangarony, miditra mora foana amin'ny palitao matevina indrindra izy io.
Ity tohotra famonosana mpiompy ity dia manana nify tery sy malalaka, afaka mampiasa tendrony midadasika kokoa ho an'ny fluffing faritra lehibe kokoa, ary ny farany tery tery ho an'ny faritra kely kokoa.
Izy io dia volomaso ho an'ny biby fiompy.
Sisila famaranana vy
Ny tohotra famaranana ny biby fiompy dia famonoana tena ilaina izay afaka mitazona ny biby fiompinao ho madio sy mahasalama amin'ny fanesorana ireo kitrokely, tsihy, volo volo ary loto.
Ny famonoana bibikely vita amin'ny vy dia maivana, mora ary mora entina.
ny metaly famaranana ny tohotra nify dia manana elanelam-potoana samy hafa, karazany roa ny elanelan'ny nify, fomba roa hampiasana, mety kokoa sy azo ampiharina.dia afaka manome fikolokoloana tanteraka.
Volon'alika alika vy
1.Ilay sisiny io dia vita avy amin'ny akora vy tsy misy fangarony, tsy mahazaka harafesina sy tsy harafesina, matanjaka, mateza ary tsy mora vaky.
2.Ny alika vy tsy misy alikaola dia natao tamina endrika malama sy mateza, ny borosy alika nify boribory dia tsy handratra ny hoditry ny biby fiompy ary hanome traikefa momba ny fikolokoloana aina nefa tsy handratra ny biby fiompinao, afaka misoroka tsara ny herinaratra mijanona koa izy io.
3.Ny alika alika vy tsy misy fangarony ity dia manampy amin'ny famongorana ny fikorontanan'ny alika sy saka, ny tsihy, ny volo malalaka ary ny loto, manentana ny hoditra koa izy io ary manatsara ny fivezivezy ao anaty, tsara ho an'ny famitana sy ny fikolokoloana ny volon'ny biby fiompinao.
Tora-by tsy misy vy ho an'ny biby fiompy
Ity comb ho an'ny biby fiompy ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony.
Ny kiran'ny vy tsy misy fangarony ho an'ny biby fiompy dia mifanaraka tsara amin'ny tanana ary mijanona ho milamina kokoa lavitra noho ny volon-trondro nentim-paharazana.
Ity borosy vy tsy misy alikaola ity dia manana nify midadasika kokoa, mety tsara amin'ny fametahana tsihy na fanomezana endrika efa vita amin'ny palitao.
Ny volon'akanjo vy tsy misy fangarony ho an'ny biby dia tonga lafatra amin'ny famaranana sy ny famonosana, manome ny olon-tianao ny fisehoany efa mihaingo.
Metal Dog Steel Comb
1.Ny alika vy vita amin'ny alika metaly boribory dia afaka miaro ny hoditry ny alika tsy misy fahavoazana, manala ny kitrokely / tsihy / volo volo sy maloto, azo antoka amin'ny hoditra marefo ny biby fiompinao.
2.Ilay alika vy alika vy ity dia vita amin'ny akora vy tsy misy fangarony, hamafin'ny avo, tsy misy harafesina ary tsy misy fiovana.
3.Ny alika vy amin'ny alika vy dia misy nify maranitra sy nify matevina. Ny nify maditra dia azo ampiasaina hanamboarana taovolo ho an'ny alika sy saka, ary ny volo miroritra dia mety ho voadio amin'ny ampahany matevina.
Sisilety alika metaly vy
1.Ny alika vy fikolokoloana alika dia mety amin'ny antsipiriany momba ny faritra volon'ondry malefaka manodidina ny tarehy sy ny tongony ary ny fikolokoloana volom-borona mifamatotra manodidina ny faritry ny vatana.
2.Ny sisin-doha alika vy dia famonoana tena ilaina izay afaka mitazona ny biby fiompinao ho madio sy mahasalama amin'ny fanesorana tangles, tsihy, volo malalaka ary loto, mamela ny volon-dohany tena tsara sy marefo.
3.Izy io dia tohotra maivana ho an'ny fitafiana tsy misy havizanana. Ity dia volon'osy fikolokoloana alika vy tsy maintsy atao mba hiarovana ny alika misy akanjo lava. Ny nify boribory malefaka dia kosehina amin'ny fikarakarana azy tanteraka. Ny nifiny miaraka amina boriboriny dia manotra moramora ary manentana ny hoditry ny biby fiompinao mba ho palitao mahasalama kokoa.